पैसा दिन्छु भन्दै राष्ट्रिय झन्डा च्यात्न लगाउने यी युवाले खाए रामधुलाई, किन यस्तो गरे यी युवाले ? (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > अपराध > पैसा दिन्छु भन्दै राष्ट्रिय झन्डा च्यात्न लगाउने यी युवाले खाए रामधुलाई, किन यस्तो गरे यी युवाले ? (भिडियो सहित)
admin March 9, 2020 अपराध, भिडियो, समाज	0
झापा । राष्ट्रिय झन्डा च्यात्न लगाउदै पैसा दिन्छु भन्ने एक युवालाई बीच बजारमा अर्का युवाले नराम्रो संग थर्काएका छन् । बाटोमा हिड्ने सर्बसाधारण मान्छेलाई रोक्दै यो झन्डा च्यात्नुस म पैसा दिन्छु भन्दै उनले च्यात्न लगाएका हुन् । उनले यस्तो काम किन गरे ? के का लागि देशको झन्डा च्यात्नु भनेका हुन् त ?
दर्शकबृन्द यो एउटा प्र्यांक भिडियो हो । उनले हाम्रो देशका नागरिकले आफ्नो देशको माया कति गर्दा रहेछन भनेर जाच गरेको बताए । बाटोमा हिडिरहेका मान्छेलाई रोकेर झन्डा च्यातेबापत् यति पैसा दिन्छु भन्दै उनले लोभ्याएर झन्डा च्यात्न लगाएको दृश तल भिडियोमा हेर्नुहोला । यसरी पैसाको प्रलोभन देखाउदा उनीहरुले के गरे त ?